Mayelana NATHI - Shenzhen Spocket Technology Co., Ltd.
I-Shenzhen Spocket Technology Co., Ltd. ine-brand SpocketGuard njengomthumeli omkhulu wohlelo lokukhombisa oluhlakaniphile, amadivayisi / imikhiqizo yokulwa nokweba nezinye izinsimbi ezihlobene eShenzhen, eChina kusukela ngo-2008, enikezela ngezindawo zokulwa nokweba nezindawo zokubeka i-POS, umakhalekhukhwini , i-PC yetafula, njll. imisila yenkomo ehlehlekayo, imisila yenkomo yasentwasahlobo, izintambo zensimbi zensimbi, izintambo zokuphepha / izintambo, imichilo ye-protec, izingidi zokuphepha, amathegi wensimbi nokunye ukuvikela ukuwa, ukuwa nokulahleka lapho kunesidingo sokubonisa noma sokuxhuma. Sinikeza isisombululo esibanzi semikhiqizo nezesekeli ezenzelwe ukuxazulula izidingo zakho zokuphepha.
Kunikezelwe ekulawulweni kwekhwalithi eqinile nokusebenza kwamakhasimende okucabangayo, ithimba lethu lokuthengisa elinolwazi lihlala likhona ukusebenza nawe ukuqonda izidingo zakho, ukuhlinzeka ngemibono, izeluleko zobuchwepheshe ukuqinisekisa ukuthi uthola isisombululo esingcono kakhulu sohlelo lwakho lokusebenza.
I- "Quality Best, Credit First, Customer First" yisimiso sethu esibaluleke kakhulu, samukela ngobuqotho wonke amakhasimende asithinte ngocingo noma ngeposi evela kuwo wonke umhlaba. Sibheke phambili ekubambisaneni okuyimpumelelo nawe!
Amamaki Akhethekile: Udadewethu inkampani ukuthekelisa iminyaka engu-12 +. IGreenlife Industrial Limited.
I-SPOCKET iletha ithalente eliphezulu nobuchwepheshe obufanele ndawonye kubaphathi beqembu abaqeqeshiwe kakhulu. Ithimba lethu liqukethe ithimba labaphathi, idepho yokukhiqiza, idepho yokuthengisa, i-R & D dept, i-QC dept, ngemuva kokuthengiswa kwensizakalo kanye nokuhamba kwezezimali, njengokwandiswa kwebhizinisi lethu, samukela abangane abaningi abavela kuwo wonke umhlaba.
Ukubonisana Kwamahhala Kwangaphambi Kokuthengisa / Ukumaka Kwesampula Kwentengo Ephansi
SPOCKET unikeza amahora ayi-12 impendulo yangaphambi kokuthengisa nokubonisana kwamahhala. Noma yiluphi uhlobo lokusekelwa kwezobuchwepheshe luyatholakala kumakhasimende ethu.
Isampula lentengo ephansi Ukwenza & Ukuhlola kuyatholakala. Singahlinzeka ngesampula ethile yesitoko mahhala, kepha impahla itholakala ngamakhasimende. Into enenani eliphakeme noma isampula eyenziwe ngezifiso izocela ukukhokhiswa kwesampula njengokucela okuhlukile.
3-10 Ukusebenza Izinsuku Ukulethwa Okusheshayo
Uma i-oda lakho selisinikile, sizokwenza konke okusemandleni ethu ukwenza ukulethwa okusheshayo kuwo wonke amaklayenti. Esinye isitoko noma into ekulungele, sinikela ngezinsuku ezingama-3-5 zokulethwa okusheshayo. Ngokuthengiselana okwenziwe ngezifiso, sizokunaka kakhulu izidingo zakho futhi sikhiqize isivumelwano sakho okokuqala.
Okuqinile Ukulawulwa Kwekhwalithi Yokukhiqizwa
Ukulawulwa kwempahla eluhlaza: Endaweni yethu ye-loacl, kunabakhiqizi abaningi bezinto eziluhlaza futhi sigcina ubudlelwano obuhle nabo, sinenani elikhulu futhi elizinzile lokuthengwa kubo futhi baqinisekisa ukusinikeza impahla esezingeni elifanele. Bahlela umuntu obhekele kuphela ukukhiqizwa kwempahla yethu kanye nokulethwa kwayo ukuqinisekisa ukuthi ikhwalithi ephephile.
Ikhwalithi yokulawula: Isikhungo sethu se-R & D sinemishini yokuhlola esezingeni eliphakeme, abasebenzi bezobuchwepheshe abanjengo-QC ku-workshop nase-QC ekupakisheni isiteji ukwenza isethi ephelele yohlelo lokuphatha kanye nohlelo oluqinile lokulawula ikhwalithi, oluqinisekisa ikhwalithi enhle kakhulu yemikhiqizo yethu yokuphepha.
Amahora angama-24 Isevisi Yokuthengisa Ngemuva Kokuthengisa
Lapho kunesidingo sekhasimende, siqinisekisa isikhathi sokuphendula samahora angama-24 nangemva kokuthengisa ukwesekwa kobuchwepheshe.
Uma noma yiliphi ikhasimende likhononda ngomkhiqizo noma ngenkonzo, sizolidlulisela kuthimba lethu lensizakalo. Bazobika ngqo kumphathi wethu wokuthengisa. Imvamisa sizobamba umhlangano neminyango yokukhiqiza, yokuthenga nokupakisha kungakapheli amahora angama-24, futhi sizophendula emahoreni angama-48 ngempendulo nesisombululo.
Ngeminye imininingwane, sicela ungangabazi ukuxhumana nathi! Samukela imibuzo yakho ku-imeyili yethu: info@spocketguard.com, futhi ubheke phambili ekusebenzeni nawe.
Ikheli: 322, A2 Complex Building, Guangqian Vil, Nanshan Dist, Shenzhen, Guangdong, 518055, China
I-hotline yomhlaba wonke: 0086-18123644002
Amahora Ehhovisi: UMsombuluko-ULwesihlanu 9: 00-18: 00
Ilungele ukukusebenzela amahora angama-24 ngosuku, izinsuku eziyisithupha ngesonto.
UKULUNGELE UKU-oda? XHUMANA NATHI MANJE!